कोभिडपछि देखिन सक्छन् यस्ता समस्या, जोगिन के गर्ने ? – Health Post Nepal
२०७८ भदौ २० गते ११:५५
कोभिडको संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरुमा विभिन्न लक्षणसहितको स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। कोभिडपछिका लक्षणहरुलाई बेवास्ता गरिएमा ज्यानै जानसक्ने जोखिम रहेको भन्दै विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले बेलैमा स्वास्थ्य संस्थामा जान र आवश्यक चेकजाँच तथा परामर्श लिन आह्वान गरेका छन्।
तर लामो समयको उपचार पश्चात डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका कतिपय बिरामीमा पुनः समस्या आएर अस्पताल भर्ना भएका छन् । अक्सिजन कम हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, शरीर दुख्ने, थकान महसुस हुने लगायतका समस्या लिएर बिरामीहरु पुनः अस्पताल आउने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर अनुसार कुनै पनि भाइरल संक्रमण निको भएपछि थकान हुने, कमजोरी हुने जस्ता समस्या आउनु सामान्य हो। तर, कोरोना संक्रमणपछिका समस्या भने अन्य संक्रमणका असरभन्दा केही कडा देखिएका छन्।
चिकित्सकका अनुसार पोस्ट कोभिडमा मुटुको गति बढ्ने, लामो समय खोकी लाग्ने, निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने, छाती भारी हुने जस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।
‘अधिकांश संक्रमितमा शारीरिकभन्दा पनि मानसिक समस्या बढी देखिएको छ । ‘के भएको भेउ नपाउने, अत्यास लाग्ने, निदाउन नसक्ने जस्तो हुन्छ। रोग निको भएपनि मानसिक रूपमा डराइरहेका हुन्छन्,’ डा. पुनले भने।
नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका सिनियर फिजिसियन तथा कार्डियोलोजिष्ट डा। जेपी जैसवालका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा पोस्ट कोभिड अर्थात कोभिडपछिको समस्या विकराल बन्दै गएको छ।
डा। जैसवालका अनुसार कोभिडको उपचारका लागि धेरै दिनसम्म आइसियू र सिसीयूमा बसेर बाहिर निस्किएकाहरुलाई ट्रमाबाट निस्किएजस्तो समस्या देखिने गरेको छ । यस्ता समस्यालाई पनि बेवास्ता गर्नुहुन्न । यस्तो समस्या बढ्दै गए स्ट्रोक र प्यारालाइसिस हुनेसम्मका खतरा हुन्छन्।
अत्यधिक थकान महसुस हुनु, मांसपेशी कमजोर हुनु, जोर्नी दुख्नु, जिउ तातो महशुस हुनु, लगातार हल्का खोकी लागिरहनु, छाती दुख्नु, मुटुको धड्कन बढ्नु वा अनियमित हुनु, सुत्न नसक्नु डररत्रास उत्पन्न हुनु, डिप्रेसन, छिनछिनमा बिर्सने बानी हुनु, टाउको दुख्नु, कानमा कृतिम आवाज सुनिनु, पेट अपचरगडबडी हुनु, छालामा बिबिरा देखिनु, कपाल झर्नु, मधुमेह नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुनु, रगत जम्न, मिर्गौलामा समस्या देखिनेजस्ता लक्षण पोस्ट कोभिडमा बढी देखिने गर्दछ।
यस्तो समस्या धेरै कम व्यक्तिमा हुने भएकाले आत्तिनु नपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ।
‘यस्ता समस्याकोे औषधि भनेको आराम हो, केही लक्षण देखियो भने सोहीअनुसार सिटामोल, खोकीको औषधिसम्म खान सकिन्छ। केही मानसिक तनाव भएको खण्डमा काउन्सिलको जरूरत पर्छ,’ पुनले भने।
सकेसम्म कोभिडबाट निको भइसकेका बिरामीले खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने डा पुनको सुझाव छ। चिसो नखाने, पोषिलो खाने कुरा खाने, र सकेसम्म शारिरीक व्यामलाई ध्यान दिनु पर्ने उनी बताउँछन्।